I-Visa yaseIndiya iVisa | IVisa yeShishini ekwi-Intanethi yaseIndiya
I-Visa yeIndiya yeShishini
Faka isicelo seIndiya eBusiness Visa
Abakhenkethi abaya eIndiya injongo yabo kukuzibandakanya kurhwebo ngeenjongo zokufumana inzuzo okanye ukuzibandakanya kuthengiselwano kufuneka benze isicelo seVisa yokuShishina ngeIndiya ekwimo ye-elektroniki, ekwabizwa ngokuba yi-Visa ye-e-Business yase-India.
Uqoqosho lwaseIndiya ngoku idibene nehlabathi ukusukela inkululeko yoqoqosho lwaseIndiya ukusukela ngo-1991. I-India ibonelela ngezakhono ezizodwa zokuzixhobisa kwilizwe liphela kwaye inoqoqosho oluqhubayo lweenkonzo. Kwisiseko sokuthenga amandla ombane i-India ikwinqanaba lesithathu, kwihlabathi liphela. I-Indiya ikwanazo nezixhobo zendalo ezininzi ezitsala umdla wobambiswano kurhwebo lwangaphandle.
Kungabanga ngumceli mngeni ngaphambili, ukukhusela i-Visa yeShishini laseIndiya, elifuna utyelelo lobuqu kwiNdawo yoonozakuzaku baseIndiya okanye kwiKhomishini eNkulu yaseIndiya kunye neleta yenkxaso kunye nesimemo esivela kwinkampani yaseIndiya. Oku ubukhulu becala kuye kwanikezelwa njengexesha elidlulileyo ngokuqaliswa kwe-eVisa yaseIndiya. I IVisa yaseIndiya kwi-Intanethi ifumaneka kule webhusayithi igqitha kuzo zonke ezi ngxaki kwaye ibonelela ngenkqubo elula nekulungelelwanisiweyo yokufumana iVisa yoShishino lwaseIndiya.
Abahambi bamashishini abaya eIndiya bafanelekile ukufaka isicelo se-an IVisa yaseIndiya kwi-Intanethi kule webhusayithi ngaphandle kokundwendwela Embassy yase India. Injongo yohambo kufuneka inxulumene neshishini kunye nentengiso yendalo.
Le Visa yeShishini laseIndiya ayifuni isitampu somzimba kwipasipoti. Abo bafaka izicelo zeVisa yoShishino lwaseIndiya kule webhusayithi baya kunikwa ikopi ye-PDF yeVisa yeShishini laseIndiya eya kuthunyelwa ngombane nge-imeyile. Ikopi ethambileyo yale Visa yeShishini laseIndiya okanye iphepha elishicilelwayo liyafuneka ngaphambi kokuqala ngenqwelomoya / uhambo oluya eIndiya. IVisa enikezelwa kubahambi ngeshishini irekhodwe kwinkqubo yekhompyuter kwaye ayifuni isitampu somzimba kwipasipoti okanye ikhuriya yencwadana yokundwendwela nakweyiphi na iofisi yeVisa yaseIndiya.
Ingaba isetyenziselwa ntoni iVisa yeShishini laseIndiya?
I-Visa ye-Indiya ye-elektroniki ye-India okanye i-eBusiness Visa ingasetyenziselwa ezi zinto zilandelayo:
Ukuthengisa iimpahla okanye inkonzo eIndiya.
Ukuthenga iimpahla okanye iinkonzo ezivela eIndiya.
Ukuzimasa iintlanganiso zobugcisa, iintlanganiso zentengiso kunye nazo naziphi na ezinye iintlanganiso zeshishini.
Ukuseta amashishini orhwebo.
Ngeenjongo zokuqhuba ukhenketho.
Ukuqesha abasebenzi nokuqasha italente yasekuhlaleni.
Ivumela ukuthatha inxaxheba kwimiboniso yorhwebo, kwimiboniso nakwimiboniso yezoshishino. Nayiphi na ingcali kunye nengcali yeprojekthi yorhwebo inokufumana le nkonzo.
Naliphi na ingcali kunye nengcali yeprojekthi yezorhwebo inokufumaneka kule nkonzo.
Uhlala ixesha elingakanani eIndiya nge-eBusiness Visa?
I-Indian Visa yeShishini isebenza unyaka 1 kwaye ivumelekile ukungena kwamangenelo amaninzi. Ukuqhubeka ngokuqhubekayo ngexesha lotyelelo ngalunye akufuneki kudlule kwiintsuku ezili-180.
Zithini izinto ezifunekayo kwiVisa yoShishino lwaseIndiya?
Ngaphandle koko iimfuno jikelele yeVisa yaseIndiya ekwi-Intanethi, iimfuno zeVisa yeShishini laseIndiya zezi zilandelayo:
Iinkcukacha zombutho wamaNdiya otyelelweyo, okanye urhwebo olululo / umboniso
Igama lesalathiso seIndiya
Idilesi yesalathiso seIndiya
Iwebhusayithi yenkampani yaseIndiya etyelelweyo
Ifoto yobuso yomenzi wesicelo
Ikopi yokuhlola iphasipoti / ifoto ethathwe kwifowuni.
IKhadi leShishini okanye iSitywina ye-imeyile yomfaki-sicelo okanye ileta yesimemo.
Funda ngakumbi malunga neZidingo zeVisa kwiShishini.
Ngawaphi amalungelo kunye nezibonakaliso zeVisa yoShishino lweIndiya?
Oku kulandelayo zizibonelelo zeVisa yoShishino lwaseIndiya:
Ivumela ukuhlala okungapheliyo ukuya kwiintsuku ezili-180 kwiVisa yeShishini yaseIndiya.
I-Indiya ye-Visa yeShishini ngokwayo isebenza ngokusemthethweni kwi-1 Year.
I-Visa ye-Indiya ye-Visa yindawo yokungena yeVisa.
Abaphetheyo banokungena eIndiya ukusuka kwesinye sezikhululo zeenqwelo moya ezingama-28 kunye nezibuko ezi-5. Jonga uluhlu olupheleleyo apha.
Abaphethe i-Visa ye-Indiya yeShishini bangaphuma e-Indiya kuyo nayiphi na iVenkile yokuKhangela yokuFudukela kwenye indawo evunyiweyo. Jonga uluhlu olupheleleyo apha.
Izithintelo zeVisa yoShishino lwaseIndiya
Ezi zithintelo zilandelayo ziya kusebenza kwiVisa yoShishino lweNdiya:
I-Visa yeshishini laseIndiya isebenza kuphela kwiintsuku ezili-180 zokuhlala ngokuqhubekayo eIndiya.
Le yiVisa yokungena ezininzi kwaye isebenza ngeentsuku ezingama-365/1 unyaka ukusukela kumhla wokukhutshwa. Alikho ixesha elifutshane elifumanekayo njengeentsuku ezingama-30 okanye ubude bexesha elinjalo njengomlotha weminyaka emi-5 okanye eli-10.
Abafakizicelo banokucelwa ukuba banike itikiti lokuya phambili okanye itikiti lokubuya kwiVisa yokuTshintshela eIndiya.
IVisa yeShishini laseIndiya ayivumelekanga ukuba ityelele iindawo ezikhuselweyo nezithintelweyo emkhosini.
Ngelixa ungadingi kutyelelwa i-Indian Embassy okanye i-Indian High Commission ngayo nayiphi na isitampu seVisa yoShishino lweNdiya, udinga amaphepha amabini angenanto kwipasipoti yakho ukuze igosa lezokufika lifake isitampu sokuhamba kwisikhululo seenqwelomoya.
Awungekhe uhambe ngendlela eya eIndiya, uvunyelwe ukuba ungene ngeNqwelo moya kunye noMkhombe kwiNdiza yeVisa yaseIndiya.
Yenziwa njani Intlawulo yeVisa yoShishino lwe-India (i-eBusiness Indian Visa)?
Abahambi beshishini banokuhlawula i-Visa yabo yeShishini lase-India besebenzisa isheke, ikhadi le-Debit, ikhadi letyala okanye a PayPal akhawunti.
Iimfuneko ezinyanzelekileyo zeVisa yoShishino lweIndiya zezi:
Nceda ufake isicelo se-Visa ye-Visa ye-India kwiintsuku ezingama-4-7 ngaphambi kokuba ubaleke.
Faka isicelo seVisa yoShishino